Home Science ABUU SHUJAAC PDF
Author: Kigar Vishura
Alle kor ahaayee, qofkuu hanuuniya wax lumin karaa ma jiro, qofkuu lumiyana wax hanuuni karaa ma jiro. Salaadda ayaa u horeyso sooma aha?
To find out more, including how to control cookies, see here: Waxaad u isticmaashay weeso waajib ah, waad ku weeso qaadatay, biyahii markaad weyso qaadatay xubna haaga ka daatay ayaa mustacmal la yiraah. Axmed Yare Play Download 6 5.
Dhahaaradii markii la bilaabo iyada laf teeda baa waxay ka bilaaban neysaa intaadan weeyseys sanin ama aadan qabeysanin, waxaa laga hadli wixii lagu dhahaara qaadan lahaa, oo maxay ah? Kitaabu Nikaax Abu Shujac Sh.
Imaamka kitaabka iskaleh tarjama dheer lagama hayo, inta badan kutubta u turjumta een arkay tabaqaatul shaaficiya al-kubraa suki iyo aguu li Zakali iyo hiddaayatul Caarifiin ee uu leeyahay Baabaaniqolya haas ayaa taraajim tiisa wax ka sheegay iyaguna aad uguma ay dheeraanin, faqiih Shaafici ah oo kitaab kan hadda aan dul joogno oon bilaabeyno caan ku ah intaas ayey kaga gaab sadeen.
Maxaa loo leeyahay marka wixii labadaa ka soo hadhay waa la isticmaali karaa? Maadada lagu saarayo lama sheegin, waxaad doonto adiga u isticmaal, ama milix isticmaal ama gob isticmaal ama xataa muxuu ahaay shimbiraha xaar kooda ayaa xataa loo isticmaalaa ama haddaad doonto u isticmaal muxuu ahaay aashito u isticmaal ama chimico u isticmaal sida hadda la yiraahdo.
Imaamu Shaafici Abuu Xaniifa waxba kama qaadanin, lamana kulmin, ma soo gaadhin, laakiin ardaydii Abuu Xaniifa buu wax ka qaatay. Al-Iqnaac oo uu leeyahay [al-qaadi imaam Wardi] ayuu sharxay, qbuu na wey ku sheegaan. Axmed Yare Shujazc Download 15 2. Labada qula maxaa la yiraahdaa? Liter baan isticmaalnaa, soo saas ma aha? Email required Address never made public. Mahad Alle ayay u sugnaatay, amaan dhamaan teed iyo mahad dhamaan teed Alle ayaa iskaleh, uunka oo shujasc Rabbi u ahaa, [yacni iskalahaa oo maamul laayay oo abuurtay], Allah ha amaano sayyid keena kor kiisa Allah ha amaano, Muxammad ahaa, ee Nabiga ahaa [kii loo waramay] ahaa.
Saxaaba diisa kor shujaac ha ahaado [salli gaas] dhamaan tooda. Axmed Yare Play Download 24 2.
Dumarka dahabka wey xidhan karaan oo waa loo ogol yahay, laakiin xagga weelasha weel in laga dhigto oo weel ahaan loo isticmaalo xaaraam nima deeda ragga iyo dumarka waa ka wada siman yihiin saas weeye macnaha. Kuwaan ayuu raacsan yahay waa qeybta saddexaad sooma aha?
Qeybta xigta ee afaraad: Wuxuu ku dhashay Basra waa wadanka Shjjaac, aabahii iyo awoow yadii na waxay ka soo jeedaan Asfahaan iyadaas ayaa loo nisbeeyaa al-Asfahaani ama al-AsbahaaniAsfahaan waa dhulkan hadda Iiraan ay ka taliso. Nadmu Waraqaad na isaga ayaa iskaleh naadim wuxuu ahaa cajab badan, kanna wuu nadmiyay oo tix gabay ah ayuu u bedelay page buu ka dhigay yuu ku nadmiyay.
Xoolahii la qalan jiray wey baqtiyeen, gowrac sharci ah lama gowracin harag goodii ama abuk aan hilib koodii la cunin ba harag gooda, yacni labada dooda isku dar, haraga noocaas ah ee baqtiga laga soo saaray, daahir ma noqon karaan? Waxaa la isticmaali jiray, waa la miizaami jiray miizaan baa la isticmaali jiray.
Waan u tegi doonnaa waa daahir. Taariikhdu maanta waa 11 bisha 2aad bisha Safar hijriga, oo ku beegan 23da November ee taariikhda miilaadiga ah. Waxaa la leeyahay mathalan: Iyo wixii iyaga raacsan oo ka ak dhow ayaa cibaadaad la yiraahdaa, kadib mucaamalaad ka waxaa imaan nayaa beycii mucaamalaad ka suuqa wax kala iibsiga, waxaa imaan naya kadib nikaaxii iyo talaaqii iyo axkaam toodiimucaamalaad bey isku dhahaan, kadib wax ka sii dambeyn naya xuduud iyo jinaayaadjinaayaad ka waa dhibaatooyinka leysu geysto, xuduud duna waad garan neysaan.
Waxaa kale uu nadmiyay Waraqaadka sooma aha? Kitaabu Xajj Abu Shujac Sh.
You are commenting using your Facebook account. Waa ninka kitaabka iskaleh waxaa inta badan lagu sheegaa marka loo turjumahayo kitaab kan ayuu caan ku yahay [saaxibul qaaya wa taqriib] ama [qaayatul iqtisaar], kitaab kan abuu caan ku yahay, laakiin keligii ma shujjaac kutub kale na waa leeyahay.
Axmed Yare Play Download 18 1. Sida mathalan; Miski ga oo kale, biyahu miski baa ku darsamay, ama ma ehee geedka dhacaan kiisa iyo biya hiisa baa ku dhex miirmay oo ku darmay, ama ma ehee mani baa ku darmantay, Manida soo daahir ma aha?
Tin iyo laf iyo gees iyo ciddi Soo wada baqti ma aha? Marka cibaadaad shujaca waa wixii ku saabsan afarta, marka laga shuaac shahaada teen ka afarta tiir ee Arkaanul Islaamka ; Salaad dii iyo Zaka dii iyo Soon kii iyo Xajj kii Iyo wixii iyaga raacsan oo ka ak dhow ayaa cibaadaad la yiraahdaa, kadib mucaamalaad ka waxaa imaan nayaa beycii mucaamalaad ka suuqa wax kala iibsiga, waxaa imaan naya kadib nikaaxii iyo talaaqii iyo axkaam toodiimucaamalaad bey isku dhahaan, kadib wax ka sii dambeyn naya xuduud iyo jinaayaadjinaayaad ka waa dhibaatooyinka leysu geysto, xuduud duna waad garan neysaan.